Wednesday November 12, 2014 - 11:13:35 in Wararka by Super Admin
Inkastoo maamulka Mareykanku uu nafta ag dhigay dadaallada lagu dhiciseyn karo gulufka Jihaadiga ee hiigsanaya soo celinta Xaqqii Muslimiinta,Uuna maamulkan gumaaday Muslimiin badan, madax kala duwanna uu dilay, hadane miraha u soo baxay ayaa noqday mid aad kaga duwan wixii la filayey.
Buush-kii hore iyo Buushkii dambe oo kala ahaa Wiil iyo Aabihiisa, labaduba waxey ku hogaamiyeen Mareykanka duulaano lagu khasaaray. Buush-kii hore ayaa Ameerikaanka la qeybsaday guuldarradiisii ugu qaraareyd markii sagaashanaadkii baqtiyada Rangers-ka Mareykanka lagu jiiday waddoyinka Muqdisho ka dib dagaalkii caanka ahaa ee Black Hawk Down.
Bill Clinton oo isku dayay inuu Ameerikaanka ka badbaadiyo haadaanti uu ka tuuray Buushkii hore ayaa isna fashilmay ka dib markii gadaashiisii la doortay Buushkii dambe, kaas oo isna qaatay siyaasad axmaqnimo ah markii uu ku duulay Ciraaq iyo Afghanistan taas oo muujisay inuu ku dhaqaaqay siyaasad qar iska xoornimo oo ka daran middii uu ku kacay Aabihiisa.
Buush-kii dambe, inkastoo buun buunin badan loo sameeyay duulaanadii uu qaaday, hadana wuxuu noqday madaxweynihii ugu fashilka badnaa Mareykanka. Wuxuu noqday beenaalaha ugu weyn maamulkiisii ay ku kulansanaayeen qowleysato dhiig-yacabyo ah sida Dick Cheney, Donald Rumsfield, Paul Wolfowitz iyo kuwa kale oo taariikh madow ka galay Xamlada Saliibiyada Caalamiga ah ee Mareykanku ku soo hogaamiyay Muslimiinta.
Hayeeshe wax la filayay ma aheyn in maamulka Obama uu noqon doono "Ka daroo Dibi dhal” marka loo eego ballan-qaadkii uu u sameeyay shacabka Mareykanka iyo duulaanada cusub ee hadda uu ku qaaday Ciraaq iyo Shaam.
Obaama oo ah nin madow ah ayaa markii 2008-dii Xisbiga Demoqoraadiga uu u doortay inuu noqday murashaxooda u taagan xilka Madaxtinimada wuxuu sameeyay ballanqaadyo dhowr ah taas oo u sahashay inuu xaabsado codadka ugu badan ee shacabka Mareykanka oo markii ugu horeysay taariikhda isku aaminay nin madow ah, balse u moodayay inuu ka badbaadin doono haadaantii uu ku riday Buush.
Ballanqaadyadii ugu waaweyn ee gaal Obama uu sameeyay waxaa ka mid ahaa inuu soo afjarayo dagaallada Ciraaq iyo Afghanistan, albaabada u laabayo Xabsiga sumcadda xun reebay ee Guantanamo iyo sido kale inuu waji wanaag ka raadin doono Umadaha Muslimiinta isagoo adeegsanayo socdaallo ay ka mid ahaayeen midki uu ku yimid magaalada Qaahira iyo khudbaddii uu halkaas ka jeediyey ee uu kula hadlayey Dunida Muslimka.
Laakin maanta 6 sanadood ka dib markii uu xafiiska yimid, aad bey kaga duwan tahay maalmihii uu lulayay halku dhiggii caanka uu ku ahaa ee "Change” oo micnaheedu tahay "Isbadal”, wax isbadal ahna maanu sameyn balse wuxuu ku sii jiiday Shacabka Mareykanka dagaallo kale isagoo ka dhigay maamulka Mareykanka Imbiraadooriyaddii ugu khasaaraha badneyd, dadkeeduna ay noqdeen bartilmaameedka ugu daran ee la raadsanayo.
Buush ayaa caan ku ahaa inuu siray dadkiisa markii uu duulaankii Afghanistan ku tilmaamay mid dhaqso ku so idlaan doona, laguna soo qaban doono halyeeyadii ka danbeeyay weeraradii 11-kii September, wuxuu sidoo kale ku siray Hubka Wax Gumaada oo la sheegay inuu heystay maamulkii Saddam Xusen ee dalka Ciraaq.
Qorshihii ugu khatarsanaa ayaa ahaa in dib loo dhigo Jihaadka iyadoo loo marayo ugaarsiga madaxda Jihaadka, inkastoo ay qaadeen dhabihi ay u mari lahaayeen hadafkaas oo ay dileen hogaamiyeyaal badan oo Mujaahidin ah; hadane waxaa u caddaatay in Jihaadka maanta socda aanu u kufi doonin Istish-haadka Qiyaadada, iyadoo taasna tusaale weyn ay u noqdeen saaxaatka Ciraaq iyo Afghanistan oo dhiigga madaxdu ku daatay, walina uu calankii Jihaadka si adag uga babanayo, Ciraaq oo maanta ay Mujaahidiintu ka talinayaan dhul baaxad leh, iyo Afghanistan oo sidaas iyo si ka daran qarka u saaran.
Isku-dayada beegsiga madaxda Jihaadka ayaa sidoo kale laga hirgeliyay saaxaadka Yemen iyo Soomaaliya, balse sida ay gaaladu qirayaan, dhimbiishii Jihaadkii ayaa ka sii laba qaraxday, meeshii uu halyey baneeyana waxaa la wareegaya halyey kale oo ka daran midkii hore.
Su’aasha ugu adag ee wareerisay maamulka Obama ayaa noqotay "Aaaway ballan-qaadyadii aad sameysay?” Muuqaalka ugu daran ee murjiyay maamulka Obama ayaa noqday”Raayaatka Towxiidka ee ka babanaya Caalamka Islaamka iyo kororka Jabahaatka Jihaadiga”.
Khudbadii sanadlaha ahayd ee uu jeediyey Bishii January ee sanadkan ayuu Obama kaga naxsaday dadyowga Mareykanka war aaney ku farxin, ka dib markii uu si cad u qirtay in haddii ay dileen madaxda Alqaacidda in Jihaadku uu ku sii baahay dhul hor leh, taas oo ka dhigan walaac hor leh oo soo kordhay.
Qofna ma filaneyn Obama in dagaallo hor leh uu gelin doono Mareykanka haddii xittaa uu ka soo bixi waayay ballan qaadyadii uu sameeyay, sidoo kale lama saadaalineyn hoos dhaca dhaqaale ee Mareykanka inuu gaari doono dhamaan xafiisyadii dawladda in loo xiro mushaar la’aan oo bankiyaduna ay ceyrtoobaan.
Culeysyadaas oo gudaha ka wajahaya ayuu hadane la kulmay dharbaaxooyin xoog leh markii calanka Jihaadka uu si adag uga babaday dhulalka markii hore ay ku duullameen, ka dibna uu ku sii baahay dhul hor leh.
Sidaasi oo jirta hadane guuldarro taas aan ka liidan ayuu maamulka Obama ka wajahayaa gudaha Mareykanka, waxana taasi caddeyn weyn u noqday natiijada doorashadii xagga kuraasta Golaha Senate-ka ee dhawaan dhacday taas oo si xun loogu jabiyay xisbiga Obama ee Demoqoraadiyyiinta.
Oliver Darcy oo wax ku qora the Blaze ayaa mucjizo weyn ku tilmaamay guuldarrada Xisbiga Demoqoraadiga isagoo arrintaas u celiyay ballan-qaadkii Obama iyo sheegashooyinkiisa oo guul dareystay.
Haatan waxaa si buuxda Golaha Senate-ka u maamulaya Xisbiga Jamhuuriga taas oo micnaheedu tahay in qaraaraatka Obama ee soo socda ay la kulmi doonaan caqabado waa weyn oo keeni kara in ismaan dhaaf siyaasadeed uu galo Mareykanka. Arrinka la xiriira murankaas ayaa hadda ka taagan magacaabista xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka oo Obama uu wali ansixintiisa kaga fadhiyo golaha ay hantiyeen Jamhuuriyiinta.
Dad badan ayaa ku fasiray guusha Xisbiga Jamhuuriga iney ifafaale weyn u tahay sida ay Demoqoraadiyyiintu ugu guul dareysan doonaan doorashada madaxtinimada ee laba sano ka dib ka dhici doonta dalkaas.
Obama oo markii hore dusha u ritay Dhaxalkii cuslaa ee Bush uu reebay ayay hadda muuqataa inuu isna sii reebi doono dhaxal midkii hore ka culus, wuxuu ka tagi doonaa Mareykanka oo Afghanistan ka cararay iyo Imaarada Islaamiga ah oo la soo baxday awood ka xoog badan midii hore.
Wuxuu ka tagi doonaa Dawladda Islaamiga ah oo ku xidideysatay Ciraaq, kuna han weyn dhul hor leh. wuxuu ka tagi doonaa Yuhuudda oo beylah u ah gulufka Jihaadka ee ka soo zaxfinaya dhulka Shaam. arrimahaas iyo kuwa kale waxaa la is weydiinayaa Kuma ayuu noqon doonaa Madaxwenaha Mareykanka ee dusha u ridan doona arimahaasi!!?
Dhageyso: Barnaamijka Diiradda Jimcaha oo uu Marti Ku Yahay Sh/Nuur Macallin C/raxmaan.